Xiddig Ka Ciyaara Premier League Oo Magaalada Paris Ku Qabtay Xaflad Rag & Dumar Qaawan Ka Qayb-galeen – Gool24.Net
Xiddig Ka Ciyaara Premier League Oo Magaalada Paris Ku Qabtay Xaflad Rag & Dumar Qaawan Ka Qayb-galeen
Xiddig ka tirsan kooxaha horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaa la ogaaday inuu sameeyey wax waali ah muddadii ay ciyaaruhu xidhnaayeen ee ciyaartoyda lagu amray inay guryahooda joogaan.
Ciyaartoy aan magaciisa la shaacin ayaa diyaarad khaas ah u qaatay caasimadda waddanka Faransiiska ee Paris, waxaanu kiraystay hotel dhamaystiran oo uu ku qabsaday xaflad waalli ah, taas oo uu ku casuumay dumarka ugu quruxda badan magaaladaas iyo dad kale oo rag iyo dumarba leh.
Sida uu qoray wargeyska The Sun, ciyaartoygan ayaa khamri iyo cabitaannada maandooriyaha ka casuumay dadkii madasha joogay, kaddibna waxa uu ku kacay falal ceeb ah isaga oo gaar ula baxay mid ka mid ah dumarkii joogay goobta.
Waxa kale oo la sheegay in xafladdan oo ka dhacday dabaq dhamaystiran oo habeenkaa isaga loo faaruqiyey in sidoo kale ay kasoo qayb-galeen shaqsiyaad ka ganacsada daroogada.
“Khamri ayay ku cabbeen hotelka, iyaga oo wada kiraystay dhamaantii xattaa shaqaalihii hotelka, waxaanay tiradoodu ahayd illaa 15 qof. Inta badan kooxdu waxay markii dambe tageen guri u kiraysnaa oo ay kasii wateen xafladda, arrintuna faraha ayay ka baxday oo qof walba maamulka ayuu lumiyey.” Ayey wargeyska u sheegeen ilo uu la xidhiidhay.
Booliska waddanka Faransiiska ayaa bilaabay baadhitaan la xidhiidha ciyaartoygan iyo falalkii dhacay.
Waddanka Ingiriiska, waxa canaan badan loo jeediyey kabtanka Aston Villa ee Jack Grealish iyo difaaca Manchester City ee Kyle Walker.